Iindaba-Ngaba uyazi malunga nophuhliso lwefowuni ephathekayo? Ibutshintshe nyhani ubomi bethu
Ukuthetha ngale mveliso, abanye abantu kufuneka ukuba bayibonile. Ngapha koko, ngokungqongqo, le mveliso ayinakubizwa ngokuba siselfowuni. Esi sixhobo savela okokuqala ngenkulungwane yama-20, xa iShanghai yayisixeko sokuqala ukuvula izikhululo zokupakisha. Emva koko, izixhobo zeBP zangena ngokusemthethweni kwimakethi yaseTshayina. Ngokubhekisele ekusebenzeni kwesi sixhobo, abanye abantu abanesithuba sasemva kweminyaka engama-80 abaye bayisebenzisa bayazi ukuba xa ufuna abahlobo bakho okanye abathengi banxibelelane nawe, kuya kufuneka ubaxelele inamba yakho yokubamba kwangaphambili. Ke xa bafuna ukunxibelelana nawe, baya kufumana isikhululo se-paging kwaye bazise eli qonga lenombolo yakho. Ekugqibeleni, iqonga liya kukwazisa, ke uyawufumana Fumana umyalezo obiziweyo ukuze ufumane umnquba kufutshane ukuze ubuye kwakhona. Ngokujonga le nkqubo, sinokwazi ukuba unxibelelwano ngelo xesha lwalungekho lula, kwaye alunakufezekisa imisebenzi ngexesha elifanelekileyo.
Ukuthetha ngolu hlobo lweselfowuni, kusondele kancinci kubomi bethu banamhlanje. Le mveliso yaveliswa yi-Motorola ngo-1973. Imbonakalo yeeselfowuni imele ukuba ngenene abantu baneeselfowuni. Kule mveliso, kukho isikrini seLCD kunye neseti yamaqhosha. Kwimbonakalo yethu, mhlawumbi le mveliso inokwenza kuphela iifowuni. Ngapha koko, inemisebenzi emininzi, enjengokudlala imidlalo, ukurekhoda kunye neMP3.
Lo matshini uvele okokuqala kumazwe aphesheya, ngokutshintshiselana nehlabathi, ilizwe lethu nalo laqala ukwazisa ngale mveliso. Ngo-1987, uGuangdong wakhokela ekugqibezeni unxibelelwano. Emva kokuvela kwale mveliso kwilizwekazi, yayithandwa kakhulu ngabantu. Nangona kunjalo, ngenxa yexabiso eliphezulu ngelo xesha, abantu babecinga ukuba ukuba nabani na wayenomatshini onjalo, uyakuba nguzwilakhe walapha ngokoluvo lwethu. Emva kwexesha, ngokuhamba kwexesha, kwaqala ukuvela iimveliso ezintsha. Ngo-2001, ifowuni ephathwayo yapheliswa ngamaxesha, nto leyo ngokwenene yaba igama zembali.
Ukuza kwe-2G yefowuni yefowuni
Ngophuculo oluqhubekayo lobuchwephesha, iimveliso ezintsha zefowuni eziphathwayo ziye zavela ebomini bethu. Nangona iselfowuni yangaphambili ibaluleke kakhulu kwiifowuni eziphathwayo, umthamo wayo mkhulu kakhulu kwaye akukho lula ukuwuthwala. Ke ngoko, abantu baphuhlise iifowuni ezincinci kunye nokukhanya. Ukongeza, ngokubhekisele kwitekhnoloji yonxibelelwano, abantu benze itekhnoloji ye2G. Olu hlobo lwefowuni ephathekayo enokudibanisa kwinethiwekhi ye-2G inokongeza imisebenzi engekabikho ngaphambili ngokusebenzisa le nethiwekhi, njengokukwazi ukuthumela i-imeyile kunye nesoftware kwabanye. Olu hlobo lwefowuni ephathekayo, kukwakho nezinye iimveliso ezaziwayo, ezinje ngeNokia, esinika umbono onzulu. Yayithandwa kakhulu ngelo xesha, kuba umgangatho weselfowni yayo wawulungile kangangokuba nokuba ungawela emhlabeni, wawunokuba unganyani.
Makhe sithethe malunga nembonakalo yolu hlobo lweselfowuni. Ngokwembonakalo, zininzi iintlobo zoyilo. Umzekelo, zikhona ezityhilwayo, kwaye kukho nezinye iintlobo zazo, ezinje ngeflip-flop, flip-flop, kunye nezitayile zescreen esikhulu, ezahlukileyo abantu abanokukhetha kuzo.
Ubulumko namandla eza
Ngenkqubela phambili eqhubekayo yetekhnoloji yethu, ngaphambi kokuba abantu benze inethiwekhi ye-2G ayisakwazi ukufikelela kwiimfuno zabantu,. Ngenxa yoko, uthungelwano lwe-3G kunye ne-4G luvele. Kwaye ngokuvela kwezi nethiwekhi, abantu bayile iifowuni eziphathwayo ezinemisebenzi engqinelanayo. Yile nto siyisebenzisayo ngoku. Olu hlobo lweselfowuni lusebenzisa ezinye izinto, njengokumamela iingoma kunye nokubukela iividiyo.